Chibvumirano chitsva chakabvumidzwa pamwe chete nevashandi vepahotera vePan Pacific Toronto
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Chibvumirano chitsva chakabvumidzwa pamwe chete nevashandi vepahotera vePan Pacific Toronto
Unifor Yemunharaunda 112 nhengo paPan Pacific Toronto hotera yakabvumidza chibvumirano chitsva nemushandirwi ne100 muzana.
"Unifor mubatanidzwa weCanada wevashandi vanogamuchira vaeni," akadaro Jerry Dias, Unifor National President. "Ndinodada nebasa rakaitwa nekomiti yedu yemunharaunda yekutaurirana kuti tiwane chibvumirano chakasimba munguva dzino dzakaoma."
Kutaurirana nevatungamiriri vehotera kwakanetswa nemwedzi yekubhadharisa mari kune wehotera mushandi hutano nehupfumi homwe uye hurongwa hwepension. Unifor Yemunharaunda 112 yakambobudirira mumatare edzimhosva ichiraira hotera iyi kuti ibhadhare madhora zviuru mazana maviri emadhora uye mubereko.
"Kutaura kuti denda re COVID-19 raiparadza vashandi vanogamuchira vashanyi," akadaro John Turner, Mutungamiri weNzvimbo 112. "Denda iri rakaratidza pachena kukosha kwevashandi vemuhotera kuchengetedzwa nesangano rinoita kuti vashandirwi vazvidavirire."
Chibvumirano ichi chinowedzera kodzero dzekurangarira nhengo dzemubatanidzwa, kusanganisira kodzero dzekurangarira dzine chekuita nedenda kusvika munaKurume 2023, kodzero dzekurangarira dzisingagumi dzekudzoserwa basa kwakanangana nekugadziriswazve, uye mavhiki makumi manomwe neshanu ekodzero dzekurangarira kune kumwe kudzingwa basa. Zvakare, nhengo dzemitauro yekuchengetedza basa yakasimbiswa nekuzvipira kusachinja nzvimbo yehotera kuita makondomu. Chibvumirano ichi chinounzawo chinzvimbo cheRusaruro Chirevereri chinzvimbo chekutsigira Vatema, Vagari vemo uye nevasaruro vashandi.
Chibvumirano chakazara kuvandudzwa kwehupfumi kunosanganisira kuwedzera mibairo, yakakwira mushandirwi mipiro kune ese hutano neepenjeni mabhenefiti, mwedzi mipfumbamwe yemishonga yekunyorera mishonga kuvharirwa kwevashandi venguva yakazara, madhora mashanu pazuva rekuwedzera kudya, uye yakasimudzirwa mvumo yekurega basa, yakanyanya iyo hotera yeToronto chikamu, yakachengetedzwa. Iye mushandirwi akabvumawo nguva yekudzosera iyo yakasara yemubhadharo wevashandirwi kune mushandi wehutano uye wehomwe fund uye chirongwa chepenjeni.
Basa rekuchengetedza dzimba rakagadziridzwa zvakare, kusanganisira kusarasikirwa kwemaawa kune vanopinda mukamuri yehotera kana hotera ikasarudza chirongwa chisina kunaka uye chinokatyamadza 'green sarudzo' mune ramangwana. Pan Pacific Kamuri vanochenesa vanochenesa kwete anopfuura gumi nemana makamuri pazuva.
"Nekuda kwekubatana kwechikwata chedu chekutaurirana nekubatana kwenhengo yedu takawana chibvumirano chinoburitsa pazvinhu zvakakosha senhengo," akadaro Andrea Henry, Sachigaro weSuniti 112 weChitatu pahotera yePan Pacific. "Vashandi vemuhotera vatambura zvakakwana mudenda iri, uye ndinodada kuti takaita mutsauko wakakura kunhengo."
Unifor mubatanidzwa mukuru weCanada mumasangano akazvimiririra, anomiririra 315,000 vashandi munzvimbo dzese dzakakura dzehupfumi. Sangano rinotsigira vanhu vese vanoshanda nekodzero dzavo, kurwira kuenzana uye kururamisira kwevanhu muCanada nekune dzimwe nyika, uye vanoedza kuumba shanduko inofambira mberi yeramangwana riri nani.